आलुमा आत्मनिर्भर कहिले बनाउने ? – Newsagro
आलुमा आत्मनिर्भर कहिले बनाउने ?
October 7, 2015 NewsAgro0Comments Agriculture, Nepal, Newsagro.com, Patato, vegetable, नेपाल कृषि अनुन्धान परिषद् (नार्क) NARC
काठमाडौं, २० असोज / भारतले तेल लगायत अन्य अत्यावश्यक सामान नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएको बेला धेरै समय राखे कुहिएर खेर जाने आलुका ट्रकलाई भने पठाइरहेको छ । यही बेला एउटा प्रश्न उठेको छ– के हामी आलु जस्ता तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौं ? आफ्नै देशमा उत्पादनको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि ठूलो परिमाणमा विदेशबाट आलु आयात भइरहेको छ । नेपालमा आयात हुने आलुको स्रोत मुलुक भारत नै हो । यस्ता तरकारीमा आत्मनिर्भर भए तेल जस्ता अरुमा भर पर्नुपर्ने वस्तुमा बार्गेनिङ गर्न सकिन्थ्यो कि ?
aसरकारी तथ्यांक अनुसार अघिल्लो वर्ष नेपालमा ५ अर्ब ९ करोड ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आलु आयात भएको छ । ५१ हजार २ सय ६७ केजी आलुको बिउ ल्याइएको छ । बिउको मूल्य ११ लाख ४३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी छ । व्यापार तथा प्रवद्र्धन निकासी केन्द्रको २०७१/०७२ को तथ्यांक अनुसार भारत, चीन र बंगलादेशबाट आलु आयात हुन्छ । भारतबाट मात्रै ४ अर्ब ४३ करोड ४२ लाख ७८ हजारभन्दा बढी रुपैयाँको आलु आयात भएको छ । बंगलादेशबाट ६५ करोड ५२ लाख ७९ हजार र चीनबाट ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँको आयात भएको छ ।
घरेलु माग धान्ने गरी आलु उत्पादन गरे कम्तीमा ५ अर्ब ९ करोडभन्दा धेरै रकम तेल जस्ता अरुमा भर पर्नुपर्ने वस्तुमा खर्च गर्न सकिन्छ । के हामी देशभित्र आत्मनिर्भर हुने आलु उत्पादन गर्न सक्दैनौं रु विज्ञका अनुसार आत्मनिर्भर मात्र होइन, निर्यात गर्ने अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौं । आलु विशेषज्ञ बुद्धिप्रकाश शर्माका अनुसार तराईको फाँटदेखि मानव बसोबास भएको उच्च हिमाली क्षेत्रसम्म आलु खेती गर्न सकिन्छ । उनका अनुसार ३० टन प्रतिहेक्टर आलु उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना छ । काठमाडौंकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि ७० टन प्रतिहेक्टर आलु उत्पादन गरेको शर्मा बताउँछन् ।’राष्ट्रिय औसत उत्पादकत्व १३.५ टन प्रतिहेक्टर छ,’ शर्माले भने, ‘अहिले १ लाख ९६ हजार हेक्टरमा आलु उत्पादन हुन्छ ।’
यति प्रचुर सम्भावना हुँदाहँदै पनि किन विदेशबाट आयात बढ्दो छ त ? शर्माका अनुसार आलु उत्पादनले प्राथमिकता पाएन । देशको आलु उत्पादन नीति र सुधारका कार्यक्रम आएनन् । जसले गर्दा आलु आयात बढ्दै गएको छ । अहिले पनि देशमा प्रयोग हुने ७५ प्रतिशत आलु यहीँ उत्पादन हुन्छ । अब पनि आलु उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादन गर्ने नीति र सुधारका कार्यक्रम नल्याउने हो भने भइरहेको उत्पादन पनि घट्दै जाने निश्चित छ । निश्चित कार्यक्रम बनाएर स्थानीय बिउलाई किसानसम्म पु¥याउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
भारत लगायत अन्य देशबाट आयात हुने आलुको बिउ प्रयोग गर्दा प्रत्येक वर्ष उत्पादन घट्दै गएको शर्माले बताए । ‘किसानले बाहिरबाट आएको बिउ प्रयोग गर्छन्,’ शर्माले भने, ‘यस्तो बिउले उत्पादन स्वात्तै घटाउँछ ।’ सरकारको तथ्यांक अनुसार भारतबाट गत आर्थिक वर्षमा ५१ हजार २ सय ६७ केजी आलुको बिउ आयात भएको छ । भारतबाट आएको टुसाएको सानो यो बिउबाट उत्पादन राम्रो नहुने विज्ञको भनाइ छ । भारतबाट आएको बिउ नेपालको तुलनामा केही सस्तो पर्न जान्छ । सस्तोकै कारण किसानले त्यही बिउ प्रयोग गर्ने गरेको छन् । नेपालमै बिउ उत्पादन गरी त्यसलाई किसानसम्म पुर्याउन र उत्पादनलाई बढावा दिन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद गम्भीर रुपमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
← डिडिसीमा पर्व छुट
सामान्य धनियाँमा पनि मुलुक परनिर्भर →